Kulan-waynaha dhalinyarada Malaysia oo looga hadlay halabuuridda ganacsiga | Radio Iftin
Kulan-waynaha dhalinyarada Malaysia oo looga hadlay halabuuridda ganacsiga
(Wednesday, March 25, 2015)- Shirka caalamiga ah ee dhalinyarada Malaysia oo sanadkan ay si wada jir ah u soo qaban-qaabiyeen machadka (IYRES) iyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Malaysia ayaa diiradda lagu saaray sidii jiilka cusub loogu abuuri lahaa fursado ay ku horumarin karaan naftooda iyo tan dalkaba.
Waxaa shirka sanadkan ciwaan loogu dhigay badallidda bulshada iyada oo loo marayo abuuridda fursado ganacsi oo loo sameeyo dhalinarada ,taasi oo ka qayb-qaadan karta horumar kasta oo dhinaca bulshada ah.
Qorshahan waxaa si wada jir ah uga faa’idaysanaya jiilka cusub iyo dowladda Malaysia,iyada oo la rajaynayo in hadii arintan la hirgaliayo in ay keento deganaansho xaga dhaqaalaha dalkaasi ah oo uu mustaqbalka lagu talaabsado.
Ra’iisul-wasaare Datuk Seri Najib Tun Razak ayaa doonaya in dhalinyaro badan ay bilaabaan ganacsi abuur si loo helo isbadalkan la filayo,waxaana uu sheegay in mashruucan uu dalka uu horseedayo horumar dhaqaale.
“ Qaabka cusub ee dhaqaalaha waa kan muujiya qorshe degaan ,kaasi oo dhiiri galin kara ahmiyadda ganacsi ,isla markaana hoos u dhigi kara kala duwanaanshaha “ ayuu yiri ray’sul-wasaaraha oo ka hadlayay ahmiyadda uu shirkan u leeyahay dowladda iyo dhalinyaradaba.
“Waxaan aaminsanahay in dadka dhalinyarada ah ay leeyihiin rajo iyo awood ay ku badali karaan adduunka iyo qaabka ganacsi ee hadda loo shaqaysto “ ayuu mar kale yiri Datuk Seri Najib.
“Dalkeena Malaysia waxa uu u baahan-yahay dhalinyaro leh hal abuur,kuwaasi oo lagu dayan karo mustaqbalka ,isla markaana dhiiri galin kara ganacsi abuurka in uu noqda mid ay bulshadu ku dhiirato “ ayaa kamid ahaa hadalada Datuk.
Mashruuc ay waaxda (MaGIC) ka hirgalisay Malaysia, isla markaana lagu taageero abuurista ganacsiyada yar-yar ayaa la sheegay in ay ka faa’idaysteen 700 oo dhalinayaro ah tan iyo markii la soo bilaabay ee sanadkii 2013-ka.
Ugu danbayn shirkan ayaa waxaa ka qayb-galay 300 oo marti ah oo ka kala yimid 10 wadan oo caalamka ah ,iyadoo kulankan uu joogay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Malaysia Khairy Jamaluddin ,ku xigeenkiisa Datuk M Saravanan iyo xubno kale oo muhiim ah oo ka socday wasaaradaha kale ee dalkaas.